Antontan'isa momba ny fandefasan-kafatra an-tsoratra iraisampirenena | Martech Zone
Alatsinainy Oktobra 17, 2011 Alarobia, Oktobra 26, 2011 Adam Small
Misy mpampiasa finday 4.2 miliara mampiasa hafatra an-tsoratra manerantany…. izany dia 3 amin'ny olona 4 eto ambonin'ny tany! Izy io koa dia mahatonga ny fandefasan-kafatra hafatra ho serivisy data be mpampiasa indrindra # 1 manerantany miaraka amina bitsika 6.1 trillion nalefa tamin'ny taon-dasa. Raha ny marina dia olona 48 tapitrisa no manana telefaona finday… fa TSY misy herinaratra, matetika mampiasa ny batterin'ny fiarany mba handoavana ny findainy. Miaraka amin'ny fitomboan'ny finday avo lenta any Etazonia, maro ny olona mandà ny fandefasan-kafatra an-tsoratra fa izany tokoa ny Tokana teknolojia mahazatra eo amin'ny telefaona rehetra eny an-tsena (ivelan'ny tena fiantsoana).
Aza esorina ny herin'ny fandefasan-kafatra - manana mpanjifa izahay sehatra marketing marketing izay mivarotra trano maro mampiasa hafatra an-tsoratra ao anatin'ny fampifangaroana haino aman-jery. Ary koa, manana trano fisakafoanana lehibe izahay izay mitondra ny olona mankao am-baravarany amin'ny alàlan'ny hafatra an-tsoratra. Doug aza dia mampiasa hafatra an-tsoratra rehefa miteny… 24% ny tahan'ny valiny tamin'ny lahateny iray, nangataka ny mpanatrika lahatsoratra MKTG ny 71813 hisoratra anarana amin'ny bilaoginy.
Ity infographic ity dia natolotry ny MBA Online
Ny fiantraikan'ny tontolo iainana amin'ny SPAM